Cajal: Google Analytics Spam Traffic iyo Waddooyinka lagu xakamaynayo
Jason Adler, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Macaamilka Macaamilka, waxay u maleyneysaa in aysan khalad ahayn in la yiraahdo Spam Analytics waa mid ka mid ah dhibaatooyinka waawayn ee macaamiisha websahani. Mawduucan wuxuu helay sumcad, waxaana jira siyaabo badan oo wax looga qaban karo arintan. Google ayaa abuuray qaybta taageerada taraafikada ee boggeeda, taas oo loola jeedo in ay na siiso macluumaadka lagama maarmaanka ah si aan xal ugu helno dhibaatadayada. Wakiilka Google Analytics Adam Singer ayaa xaqiijiyay in shirkadu ay haatan isku dayayso in ay xaliso dhibaatada. Si kastaba ha ahaatee, waxay qaadan doontaa wakhti, taariikhda saxda ah lama ogayn. Ugu horreyntii, waxay falanqaynayeen in ka badan 259 xisaabood Google Analytics ah, oo aan ku jirin fayrus iyo spam - cla 1000mg information. Waxay sameeyeen shaandhada waxayna ku yartahay ugu yaraan shan iyo labaatan maalmood oo booqasho gudbin ah maalin kasta. Wadarta gaadiidka taraafikada ayaa ka badan toban boqolkiiba, iyada oo konton boqolkiiba oo ka mid ah boggaga internetka ay gaarsiiyeen taraafiko ka badan shan boqol. Waa inaad ka fakartaa inaad isticmaasho qalabkan kaa caawin doona inaad ku hayso xogta Google Analytics iyo tirakoobka ilaa iyo taariikhda oo bilaash ah.
Waa boodbood sare oo isdaba joog ah oo cusbooneysiiya si joogto ah. Waqtiga oo dhan, waxay cusbooneysiisaa in ka badan 550 domaan oo liisaska liiska leh oo ku jira URL shaki leh oo sifeeyaa kuwa isku xira si ay kuu siiyaan natiijooyinka ugu fiican uguna habboon. Qalabka waxaa lagu heli karaa bilaash ah kharashka, wuxuu leeyahay xidhiidh fudud oo la adeegsan karo oo leh fursado raadin badan..Sidoo kale, waxaa lagu cusboneysiin karaa xisaabro badan, fikraddana si fudud ayaa loo sifeeyaa. Xaddidaadda kootada waxay ka badan tahay toban kun oo codsi maalintii, laakiin waa inaad cusbooneysiisaa filtarradaaga mar kasta oo aad ku daro aallado cusub qalabkani.
Aan u cadeeyno in Aaladda Analytics aysan lacag la'aan aheyn; waa inaad bixisaa $ 15 bishiiba si aad u hesho dhamaan sifooyinkaas, laakiin qiimahaasi wuu ka hooseeyaa madax xanuunka qalabkani wuu yareeyn karaa. Waa mid ka mid ah qalabka ugu quruxda badan oo cajiib ah maaddaama ay kordhinayso tiradaada warbixinnada Google Analytics oo ku siinaya natiijooyinka ugu saxsan. Qalabkani wuxuu si toos ah u cusbooneysiinayaa filtarrada, sidaas darteed maahan inaad qabato shaqo khaas ah mar kasta oo aad geliso goobo cusub. Waxaad isticmaali kartaa shaandhada dhammaan noocyada guryaha, aragtida, iyo koontooyinka. Qalabka wuxuu leeyahay interface-fudud oo si fudud loo fahmi karo. Qaybta ugu wanaagsani waxay tahay in aysan lahayn xadka kootada, taas oo micnaheedu yahay waxaad ku dari kartaa domains badan iyo subdomains sida ugu macquulsan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad diiwaangelisaa oo aad heshaa ansixinta, iyo sidoo kale bixinta khidmad si aad u hesho qalabkan iyo sifooyinka kala duwan.
Qalabka Spam Filter
Spam Filter Installer waa il furan iyo software bilaash ah. Waa mid ka mid ah qalabyada ugu firfircoon ee spam ee ku shaqeeya internetka. Way sahlan tahay in la soo dejiyo oo uu leeyahay wax badan oo muuqaal ah. Tani waxaa lagu hirgelin karaa goobtaada waxayna leedahay fikrado kala duwan oo lagu kala dooranayo. Qalabka waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya hal domain mar kasta oo uu leeyahay xadad kootada laba kun oo qof maalintii. Sidoo kale, tirada filtarrada iyo domains si sax ah looma cusbooneysiiyo, waana caqabada ugu weyn ee qalabkani.